Waxaa laga yaabaa inaadan kaliya ku fiicnayn tan | Martech Zone
Waxaa laga yaabaa inaadan ku fiicnayn tan
Jimco, Diisambar 3, 2010 Talaado, Oktoobar 14, 2014 Douglas Karr
Marwalba mar ayaa waxaa kuu duceeya qof waqti ku qaata inuu kuugu mahadceliyo kadib markaad khudbad jeediso. Waxaan kula kaftamayaa dadka ii sheega sida weyn ee kalfadhigu ahaa anigoo ogeysiinaya inaan waligey ku fiicneyn ballet. Had iyo jeer way kacsan tahay, laakiin sheeko ayaa ka dambeysa.
Runtii waan jeclahay qoob-ka-ciyaarka
Hooyaday ayaa iga dhigtay inaan qaato casharada tubada iyo jazz inta badan caruurnimadaydii. Nasiib wanaag, waxaan awooday inaan ka qariyo xaqiiqdaas saaxiibaday badankood. Waxaan sidoo kale aaday iskuul laba magaalo oo ka durugsan istuudiyaha sidaa darteed waligey kama aanan walwalin qof soo bandhigaya sheeko xasaasiyadeed oo igu aqoonsanaya jaakadeyda jilicsan iyo kabaha taatikada maqaarka ee patent
Shaandheyn, boodbood, tallaabo.
Ku noqo barta. Dadka qaarkiis si fudud kuma fiicna qoob-ka-ciyaarka. Wiilkaygu, tusaale ahaan, wuxuu leeyahay laxanka cajiibka ah. Wuxuu ciyaarayaa tan oo qalab ah wuxuuna isku daraa muusig u eg dhawaaq aan caadi ahayn. Laakiin ku dheji dabaqa qoob-ka-ciyaarka wuxuuna umuuqdaa inuu yahay baqal-dabacsan oo canqawga murgacasho qaba. (Waan ka xumahay Bill, weli waan ku jeclahay adiga!) Nasiib dhammaanteen, oo ay ku jirto saaxiibtiisa cajiibka ah, runti wuxuu ku wanaagsan yahay xisaabta. Runti aad ayuu ugu fiicanyahay xisaabta.
Waayahay… halkan waa barta. Dadka qaar ayaa dhuuqa Twitter-ka, qaarna waxay ka nuugaan Facebook-ga iyo xitaa in ka sii dhuuqsan barta wax lagu qoro. Jooji isku dayga inaad ka dhigto inay sameeyaan waxa aysan waligood ku fiicnaan doonin. Shirkadaha qaar ayaa isku doon wada ah. Kuma fiicna waxaas… waligood kuma fiicnaan doonaan. Jooji iskuday inaad kala hadasho. U ogolow inay sii wadaan waxa ay runti ku wanaagsan yihiin.
Kuma fiicni baleeti.
Xaqiiqdii, weligay iskuma dayin ballet. Hadana, nasiib aniga ahaan, igama dhigaysid inaan tijaabiyo. Haddii aad nuugto Twitter, waqtigaaga ku maalgeli meelo kale. Haddii aad dhuuqdo Facebook, jooji inaad ku xirto derbiyada dadka tartamo ku saabsan nooca xayawaanka xayawaanka aad u eg tahay. Haddii aad nuugto barta wax lagu qoro, u tag raadso qof ku fiican oo u oggolow iyaga inay qoraan waxyaabaha ku jira.
Ka bood bood, boodbood, iyo heer sare.
Waxaa laga yaabaa inaadan ku fiicnayn waxyaabahaan warbaahinta bulshada. Waa caadi, waan hubaa inaad wax kale ku fiican tahay. Haddii aad siisay baraha bulshada tallaalkaagii ugu fiicnaa oo aadan meelna u gaareynin, taas beddel u tag.
Tags: balletbloghubkaaqoob kacayaarwarbaahinta bulshada
Dhimashada Wakaaladda Diiwaanka